Miyuu Virgil van Dijk xaadiri doonaa caawa Xafladda lagu bixinayo abaal-marinta Ballon d’Or 2019? – isagaa ka jawaabaya - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
Miyuu Virgil van Dijk xaadiri doonaa caawa Xafladda lagu bixinayo abaal-marinta Ballon d’Or 2019? – isagaa ka jawaabaya
December 2, 2019 at 10:50 Miyuu Virgil van Dijk xaadiri doonaa caawa Xafladda lagu bixinayo abaal-marinta Ballon d’Or 2019? – isagaa ka jawaabaya2019-12-02T10:50:14+01:00 CAYAARAHA
(Paris) 02 Dis 2019. Daafaca Liverpool ee Virgil van Dijk ayaa shaaca ka qaaday haddii uu xaadiri doono caawa xafladda lagu bixinayo abaal-marinta Ballon d’Or 2019.
“Ma jiri doonaan kuwo guuldarreystayaal ah” ayuu yiri Van Dijk oo xaqiijiyey inuu xaadiri doono xafladda caawa ee abaal-marinta Ballon d’Or.
Joog-dheeraha daafaca uga dheela Reds iyo xulka qaranka Holland ee Virgil van Dijk ayaa xaqiijiyey inuu u safri doono Magaalada Paris, halkaasoo caawa oo Isniin ah lagu qabanayo xafladda lagu bixinayo Ballon d’Or, iyadoo Van Dijk uu ka mid yahay saddexda musharrax ee ku tartami doona abaal-marintaas.
Virgil van Dijk ayaa caawa doonaya inuu abaal-marintan Ballon d’Or ku garaaco Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi sidaas awgeed waxa uu xaqiijiyey inuu iska xaadirin doono Hoolka xafladda lagu qabanayo.
Van Dijk ayaa joogi doona caasimadda Faransiiska oo caawa looga dhawaaqi doono xiddiga ku guuleystay abaal-marinta Ballon d’Or 2019, laakiin waxa uu sheegay inuuba sidaan guuleyste ku yahay marba haddii la soo bandhigay waxqabadkiisa.
Wuxuu yiri: “Waxaan u socdaa inaan fiiriyo waxa i quseeya, waxaan u maleynayaa inaysan jirin cid guuldarreysatay habeenkaas.
“Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan ku jiro geesiyaashaas, inaan joogo halkaas oo lagu soo bandhigayo sidii aan ugu soo ciyaaray kooxda sanadkii hore iyo waliba sidoo kale waxqabadkii Wadankeyga.
“Waa uun wax lagu faano, maxaa yeelay ciyaartooy badan oo halkaas aada ma jiraan, wax guuldarro ah ma jiraan habeenkaas, waan arki doonnaa waxa dhaca.” ayuu hadalkiisa ku soo koobay Van Dijk.
« Somalia, Sweden ink MoU on diplomatic staff training
Daphne Caruana Galizia: Ra’iisul wasaare is casilaya ka dib xanaaq ka dhashay weriye la dilay »